भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि नेपाल आउनेको लस्कर:: Mero Desh
भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि नेपाल आउनेको लस्कर
Published on: ३१ बैशाख २०७७, बुधबार १३:२८
नेपालगन्ज : बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा एकै दिन ३४२ जना नेपाली भारतबाट आएका छन्। केही दिन यता जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट गरी ३४२ सयको हाराहारीमा नेपाली आएका छन्। भारतले लकडाउन खुकुलो बनाएपछि नेपाली घर फर्कने बढेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्र्यालय
भगवानपुरका इन्चार्ज इन्सपेक्टर मानबहादुर बिसीका अनुसार भारतको कोरोना अति प्रभावित मुम्बइलगायतका राज्यबाट एकैदिन ३४२ जना नरैनापुर आएका हुन्। जसमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका ९ जना पनि छन्। बुधबार पनि थप पाँच जना आएका थिए। नरैनापुर गाउँपालिकाले ७ ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाएर उनीहरुलाई राखेको छ। वडा नं. २ को लक्ष्मणपुरस्थित आदर्श माविमा ८१ जना, वडा नं ५ भगवानपुरको दीपेन्द्र माविमा ६५ जना, वडा नं ६ को जयकिसन माविमा ५७ जना, नेराप्रावि परशुरामपूर्वामा ५७ जना र वडा नं. ३ कालाफाँटाको नेराप्रावि शंकर नगरकोटियामा ४० जनलाई राखिएको छ। नेराप्रावि खोदवामा ३४ जना यसअघि आएकाहरुलाई राखिएको छ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा भारतबाट आएका नेपालीहरु । तस्बिर सौजन्य : मधु पौडेल
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका ९ जनालाई भने नेराप्रावि सोहनपुरमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी डुडुवा गाउँपालिकामा पनि मंगलबार २६ जना भारतबाट आएका थिए। बुधबार पनि केही भारतीय क्षेत्रमा आएर बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी शिवबहादुर सिंहले बताए। उनका अनुसार साँझसम्म उनीहरु नेपाल ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
भारतबाट लुकिछिपी ठूलो संख्यामा नेपाली घर फर्कन थालेपछि भने नेपालमा रहेका भारतीयलाई पठाएर नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने स्थानीय स्तरमा तयारी भइरहेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने नानपारास्थित क्वारेन्टाइनमा चार सय ४६ जना नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीले बताए। उनका अनुसार बाँकेका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेका भारतीयको संख्या भने एक सय ६८ रहेको छ।
‘भारतको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीको ज्वरो मात्र नाप्ने काम भएको छ। नेपाल फर्कने बित्तिकै कोरोना परीक्षण नगर्ने हो भने कोरोना संक्रमण फैलन सक्छ’ एक सुरक्षा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे।